Dibana neembaleki eziphambili ezithathe inxaxheba kwi-World Military Boxing Championship
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi ongahlawulwayo	I-AIBA, Ubuntshatsheli beMidlalo yeHlabathi yoMkhosi wamanqindi	0
Iimbaleki ezikumgangatho wehlabathi zizokulwa kwi-World Military Boxing Championship eMoscow, eRashiya. Itonamenti izakubanjwa nge-18 kweyoMsintsi ukuya kumhla wama-25 kwikomkhulu laseRussia apho amazwe angama-39 ebeze kuthatha inxaxheba kukhuphiswano.
Elinye lamaqela ahonjiswe kolu khuphiswano yiBrazil, owazisa iMoscow yeQela leHlabathi le-AIBA u-Beatriz Ferreira, kunye neembethi manqindi zayo eziphambili uWanderson de Oliveira, uKeno Machado no-Abner Teixeira.
Enye intshatsheli ye-AIBA u-Ekaterina Paltceva uzokumela iqela eliza kubamba iRussia kunye nabakhuphisana nabo abomeleleyo uVadim Musaev, Aleksei Semykin, Ivan Sagaidak, Svetoslav Teterin.
UTemirtas Zhussupov, Aslanbek Shymbergenov noDamir Toibay ziimbaleki eziphambili ezivela eKazakhstan. U-Enkhmandakh Kharkhuu waseMongolia uya kuba kukhuphiswano olomeleleyo kwi-52 kg.
Iimbaleki ezinetalente, uShunkor Abdurasulov kunye noLazizbek Mullojonov bavela e-Uzbekistan ukubonisa ukusebenza ngokuqinileyo. UDmitry Asanau, umlo wamanqindi wase-Belarus oneminyaka engama-25 ubudala, uzakuba phakathi kweentandokazi kudidi lwe-64 kg. UMahammad Abdullaev uyakumela iAzerbaijan kwiklasi ye-heavyweight.
Phantse iimbaleki ezingama-300, kubandakanya nabasetyhini abangama-49, baya kukhuphisana ngeembasa kwiiklasi ezili-10 zobunzima bamadoda nakumahlelo ama-5 amabhinqa. Ukhuphiswano lokuqala luya kubanjelwa kwiziko lezemidlalo le-CSKA, kumjikelo wokugqibela - e-VTB Arena.
UJosh Taylor ufuna ukuvala unyaka nge-bang ngokuchasene noJack Catterall	UJose Valenzuela uqeqesho lweenkampu zoqeqesho
Ubuntshatsheli be-EUBC yoLutsha kumdlalo wamanqindi waseYurophu uqala eBudva
UJonas ukuba ngumxholo wabasetyhini baseNgilane beBhokisana kwiNkomfa yeBhokisi